Ingabe izinyawo zamabhayisikili ezintabeni ziyawenza umehluko? - Ibhayisikili Lezintaba
Main > Ibhayisikili Lezintaba > Bheka izinyawo zamabhayisikili asezintabeni - inkomba ephelele
Bheka izinyawo zamabhayisikili asezintabeni - inkomba ephelele
Ingabe izinyawo zamabhayisikili ezintabeni ziyawenza umehluko?
Ukusebenza ngokuthuthukile okuthuthukile, njengoba amandla adluliswa kulo lonke uhlangothi lokushaya ngamandla. Ukuphathwa okuthuthukisiwe kokugibela kwezobuchwepheshe. Akunamahlumelaamaphedaligcina izinyawo zakho zinamathele ku-ibhayisikiliezincwadini ezinamaqhuqhuva futhiyenzaizinto ezinjenge-bunny-hopping zilula kakhulu. Ukwehlisa usayizi.12. 2016.
Ama-pedal angenye yezinto ezihamba ngaphandle kokusho ngebhayisikili, kodwa zibaluleke kakhulu ekuzilungiseni. Futhi isizathu salokho iqiniso lokuthi bayiphuzu lakho lokuxhumana, kodwa futhi nendlela ibhayisekili eligibela futhi eliguquka ngayo ngendlela ozizwa ngayo. KwaGMBN sisekelwa yiCrank Brothers esebenza kahle kithina njengoba benza ama-pedal ayisicaba kanye nama-pedal angenamavidyo.
UBlake uyawathanda amafulethi. Ngokwami ​​ngingumlandeli weziqeshana. Futhi, ngokuvamile, ifanela isitayela sethu sokushayela.
Kepha lapha, ngemuva kwami, ngineqembu lonke lezinyawo nezicathulo ezahlukahlukene. Futhi ngizokuqondisa ngendlela engcono kakhulu yokukhethela isisekelo esifanele. Ngakho-ke, umbuzo wakho wokuqala okudingeka uzibuze wona ukuthi, uzoshayela iziqeshana noma amafulethi? Ngakho-ke amabhayisikili amaningi eza nama-pedal ayisicaba njengokujwayelekile, futhi angamaphedali ongawasebenzisa ukuthuthukisa amakhono akho okugibela.
Manje, isizathu ukuthi, ungavele ungene ebhayisikilini futhi uzigibele kuzo zonke izicathulo zakho. Abaqeqeshi, izicathulo zokuhamba, noma yini. Futhi awusafundi amakhono akho ayisisekelo okushayela.
Lezi yizinto ezinjengebhokisi le-bunny, uqonda kahle ukuthi ibhayisikili lisabela kanjani lapho lingekho emgwaqeni. Futhi kaningi abantu bazoshintshela kuma-pedless angenazicucu. Kodwa akuhlali kunjalo, abanye abantu bakhetha ukuqhubeka nokuhamba ngezinyawo ezingeni ngoba lihambisana nendlela abafuna ukugibela ngayo ibhayisikili.
Futhi engikushoyo ngalokho ukuthi leyo nkululeko, leso siqalo esinolaka lapho ungaphonsa khona izinyawo zakho ngokushintshana futhi ngokuvamile ungazizwa sengathi unebhayisikili eliningi. Isibonelo, bheka iSam Hill okwake kwaba ngumjaho weNdebe yoMhlaba owehlayo futhi manje ungumpetha we-Enduro World Series ka-2017 futhi wakwenza lokho kuma-pedal ayisicaba, okuyinto engavamile neze njengoba wenza iningi lalo mjaho wasensimini ku-Thola ama-pedal angenazicucu ngoba bafuna ukunciphisa ukukhathala komzimba wakho, engizokuchazela kona ngomzuzwana, futhi ngikwazi ukunyathela ngamandla ngangokunokwenzeka ngisho nangaphandle kwendlela. Ngakho-ke uSam ungomunye walezo ezingahambi kahle emhlabeni wokuhamba ngebhayisikili okufakazela ukuthi kuncike kwisitayela sakhe sokugibela lokho akufunayo.
Kepha ungakuvumeli lokho kukuhlehlise ukugibela iziqeshana noma amaphedali ayisicaba, uzokwenza ukukhetha okulungele wena. Ama-pedal flat akunikeza ithuba lokuba nenkululeko ethe xaxa ebhayisikili lakho futhi akusabisi kangako ukugibela njengama-pedals angenalutho. Ungahlasela ingadi yasemadwaleni wazi ukuthi uma kukhona okungahambi kahle, ungehla ngebhayisikili lakho kalula, futhi ungathokozisa unyawo lwakho ngenjabulo ezimweni ezishelelayo nezimaxongo.
Futhi isiphetho? Ngama-pedal ayisicaba, nawo alungele kakhulu abantu abathanda ukugxuma. Abantu bathanda uBlake. Ama-pedal angenazicucu ukuziphendukela kwemvelo abashayeli abaningi abazokwenza uma nje befunde ukugibela kahle.
Manje izinzuzo zokuhamba ngezinyawo ezingenasici zisobala impela. Uqala ngesicathulo esifanele sokuhamba ngebhayisikili, futhi lokho kusho ukuthi sinesikhala esiqinile, okusho ukuthi ukudluliswa kwamandla kwakho ngqo kuphedali kuthuthukiswa ngokuphawulekayo uma kuqhathaniswa nesicathulo esicwebezelwayo esishintshashintsha kalula kufanele siguquguquke nge-pedal eyisicaba, kusobala ukubamba isinyathelo. Kepha awukudingi lokho ngoba unesifutho esigcina isicathulo sakho endaweni yaleso sinyathelo esingaqhofozi esinyathelweni, iqiniso ukuthi ungasidonsela emuva naphezulu.
Manje ngeke usakusebenzisa lokho lapho ushova, kodwa iqiniso lokuthi ungenza umbuthano osebenza kahle lingcono kakhulu ekusebenziseni imilenze yakho lapho uhamba ngebhayisikili. Manje kunezinye izinzuzo zokunqampula ezinyaweni futhi lokho iqiniso lokuthi ungakhanya kakhulu ebhasikisini. Isibonelo, uma uhamba ngezinyawo ngensimbi edwaleni ukuze ugcine izinyawo zakho ebhayisikili bese uyama futhi ugxume, ngomqondo ongokomfanekiso, uzobe ugibela kahle ngemuva kwebhayisikili.
Futhi lokho kusho ukuthi isondo lakho langemuva lizothatha isijeziso esiningi. Uma uhamba ngezinyawo ezingenamakhompiyutha, awudingi ukugcina izinyawo zakho phezu kwezinyawo. Ngakho-ke ukhululekile.
Kusho nokuthi uzobe ubambe imigoqo kancane ngokuqinile, ngakho-ke uzoba nezinkinga ezimbalwa ngobuhlungu bengalo nobuhlungu besandla. Ngakho-ke kunezinzuzo ezibalulekile zokusebenzisa ama-pedless angenamavidyo, kepha kwenza kube nzima ukukhetha ukuthi yikuphi okulungele wena; ama-pedless angenamakhompiyutha adinga ukuzibophezela okuningi kuwe, mshayeli. Manje lokho kusho ukuthi uma uyishayela engadini yasemadwaleni noma ephaseji elishelelayo elimanzi impela ngenkathi ungakuvumela konke kulenge esisekelweni esiphansi futhi kulula ukweqa ebhayisikili kufanele ukhethe umugqa bese uthayipha nendlela ohamba ngayo ama-pedless angenazicucu, zibandakanya kakhulu.
Ungagxuma kalula kuzo uma udinga esimweni sokuphahlazeka, kepha kungasabisa kakhulu uze ujwayele. (Umculo we-Blues) Kunezinto ezimbalwa okudingeka uzicabangele ukuze ukhethe i-pedal flat. Vele, into yokuqala okufanele ucabange ngayo yisabelomali sakho.
Ngakho-ke isisekelo esishibhile esinjengalesi empeleni senziwe nge-diecast. Ngakho-ke kushibhile kakhulu kunaleyo eyenziwe ngomshini ye-aluminium kanye nama-pedals aphezulu kakhulu owathola emakethe. Njengobubi, kunzima kakhulu.
Kepha isasebenza njengephedali eyisicaba, futhi lena inenzuzo encane kune-pedal yayo enkulu yomfowabo. Kokubili okuvela kuCrank Brothers, uzobona ukuthi i-Q factor ihluke kakhulu kulezi. Nge-Q-factor ngiqonde ukuthi ibanga le-pedage cage kusuka ekhanda Unyawo empeleni lude kude ne-crank.
Ngakho-ke, uma ukujabulela ukuhambisa unyawo lwakho kakhulu kunyawo noma unezinyawo ezinkulu, lokhu kuzokufanela ngempela. Manje ungacabanga nosayizi we-pedal, kunezinketho ezahlukahlukene emakethe. Kepha iCrank Brothers inokukhohlisa okuncane emkhonweni wabo, empeleni benza isigwedlo ngosayizi ababili abahlukene.
Futhi lokho kuvumelana nje nabantu abanezinyawo ezinkulu noma ezincane umuzwa wephedali enkulu noma iphedali elincane. Manje okunye okufanele ukubheke ngePedalsis th e thickness of them. Qaphela ukuthi le nselo yewugqinsi nokuthi inciphile kangakanani le nselo, isigwedlo esincanyana sizobe sikunika umuzwa omuhle ngoba unesikhungo esiphansi samandla adonsela phansi, uzizwa uzinze kakhulu ngebhayisikili futhi uma ukujabulela ukuhamba ngamatshe kanye nempahla enezimpande mancane amathuba okuthi ushaye phansi.
Njengokwehla, inesici esiqinile kakhulu se-Q ngenxa yokwakheka kwayo futhi ihleli khona kanye kulayini, ngakho-ke uma unezinyawo ezinkulu noma ufuna ukunyakazisa izinyawo zakho phezu kwephasi ngeke likhululeke kakhulu kuwe, nawe kungaba ngcono entweni enjalo. Manje-ke, ukukhetha kwephedali kuncike kuwe nokuthi uligibela kanjani ibhayisikili, kepha cabanga ngezinto ezimbalwa ezahlukahlukene lapho. Ngakho-ke into yokugcina okufanele uyicabangele ngezinyawo ezisicaba ukuthi babambelele kangakanani.
Manje ungahle ucabange ukuthi ufuna ukubambeka ekugcineni futhi unyawo lwakho ngeke luhambe yonke indawo, uhlobo lomuzwa ofana nobubi. Kepha empeleni, abanye abashayeli abakufuni lokho. Isibonelo, uBlake, ngobuningi ngoba ethanda ngempela ukugxuma, uthanda ukuhamba phezu kwesitebhisi futhi ufuna izikhonkwane ezimfishane kunyawo lakhe ukuze abe nenkululeko yokwenza kanjalo.
Ngokwami, uma ngigibela amaphedali ayisicaba angifuni ukuthi unyawo lwami luye noma yikuphi, ngifuna ukuthi lunanyathiselwe lapho. Ngakho-ke ungalungisa ukuzwa kwesisekelo ngokusebenzisa izikhonkwane ezinkulu ikakhulukazi ngaphandle nangokusebenzisa izikhonkwane ezimfushane ngaphakathi. Noma, isibonelo, le pedal ye-DMR ayinayo leyo nketho, ngakho-ke unyawo lwakho luhlala ngokwemvelo.
ucwaningo lwamuva ngamafutha agcwele
Niyabo, muhle impela. Ngakho-ke kunezinketho eziningi ezahlukahlukene zamaphedali asicaba. Thatha nje isikhathi ucabangele izinto ezibalulekile kuwe ngaphambi kokuzithenga. (Umculo we-Blues) Manje ake sibheke ukukhetha i-pedal engenasiqeshana, futhi lokho kuhilela okungaphezulu kokunyathela okuyisicaba.
Ngakho-ke okokuqala kufanele unqume ukuthi ungumgibeli onjani? Ungumgibeli we-XC, ingabe uyi-Trail, ngandlela thile? Enduro umgibeli noma ingabe umgibeli ekwehleni? Futhi-ke ufuna ukucubungula uhlobo lwezicathulo okungenzeka uzigqoke, ngakho-ke uma ungumgibeli weXC, unganaki iqiniso lokuthi lesi yisicathulo sasebusika, isicathulo seXC. Uzoba yedwa kakhulu, eqinile kakhulu, kumayelana nokusebenza kahle kwepedaling. Futhi ukusebenza nawe ufuna isisekelo esincane esihlangene.
Ngakho-ke lokho kufanele kubhekwe. Kumgibeli womzila wakho ojwayelekile, uzobe ufuna okuthile okungenzeka kulayini ofanayo kepha unendawo ebanzi, engcono kakhulu ebhayisikili, futhi ikunikeze inkululeko ethe xaxa kuhlobo lwamaphedali owakhethayo. Uma ungaphezulu kwesitayela sokugibela se-Enduro, uzoba ne-outsole enzima kakhulu.
Futhi kukukhawulela ngezinyawo ongazisebenzisa. Isibonelo, awufuni ukusebenzisa lokhu kuzinyathelo ezinkulu zokwehlisa intaba ngoba ubambe kakhulu. Futhi empeleni kuzokuvimbela ukukhishwa kwesinyathelo.
Futhi-ke kukhona inketho yokwehla. Kukhetho lokwehla intaba, ufuna okuthe xaxa okubabazekayo, okubushelelezi okuvumelana ngokuphelele nendawo enkulu yesisekelo. Ake sibheke ama-pedals kuqala futhi singakubonisa kahle ukuthi ungakwenza kanjani kuthintane nezicathulo.
Kubagibeli be-XC, iqiniso lokuthi banesicathulo esiqinile impela akusho ukuthi i-pedal enkulu kukho konke lokho kugxishwa ngoba ngeke ukuzwe. Nakhu ukuthi ungasizakala kanjani nge-pedal encane kakhulu ekhejiwe. Manje akusikho okuncane kakhulu laphaya, kunezincane, kepha lokhu ukuqhathanisa okuhle kwalokho abantu abangaqhubeka nakho.
ibhayisikili lezintaba lokumiswa ngokugcwele le-cannondale
Yinhle futhi incane, inamahlombe kuphela ngaphandle kohlelo lokugcina iziqeshana oluhlala kahle esicathulweni. Ikunikeza usizo oludingayo, lincane kakhulu futhi alunakuvinjelwa ngomsebenzi wodaka umgibeli weXC angaludinga. Ngakho-ke ngomzila wezintaba zonke nomgibeli we-enduro, uwuhlobo lokwehlukanisa ngezinketho ezitholakalayo.
Okokuqala, unenketho elula, futhi lokhu kuningi lokukhetha isitayela se-XC esenziwe ngesobho. Ngakho-ke inesistimu efanayo yokugcina i-cleat. Inephiko ngaphambili ukubeka isisekelo ngaphambili. ukuvikela iziteleka zamadwala neziteleka zomhlaba.
Kepha futhi ikunikeza ukuzinza okuthe xaxa kulokhu okusetshenziswayo, ngakho-ke kuhamba nesicathulo esinethambo elithambile elithamba kancane kunesihlangu esijwayelekile se-XC. Enye inketho ngakolunye uhlangothi lobubanzi yiphedali elikhudlwana. Manje kubukeka njengokuhamba phansi kwehla lapho okususelwa kuma-pedals ayisicaba.
Icwecwe kakhulu ngakho-ke ikunikeza ukusekelwa kanye nezinzuzo zokwehla kokwehla kwephakeji elincane, elilula, okuhle ngezicathulo ezinesitayela se-enduro, futhi uhlobo lokukunikeza okuhle kunakho konke imihlaba. Ngakho-ke lesi isicathulo esigxile emzileni, sinokufana nesicathulo se-XC, ekutheni okuphezulu kukhanya kuhle, kuyindlela enhle yokuhlanza ezansi lapha, futhi une-sole elihle kakhulu ngakho-ke lilungele ibhayisikili. Leli kuphela elibanzi linezinye izingxenye ezifulethi lapha, ezingahlanganiswa kahle kakhulu nama-pedals amakhulu, unethuba lokuthi ungasebenzisa i-pedal encane noma uthathe i-pedal enkulu.
Awukutholi ngempela lokho ngezicathulo ze-XC. Ngakolunye uhlangothi lwe-spectrum, unesihlangu esigxile kakhulu se-enduro. Ngakho-ke nalapha unesistimu yokubamba engenhla ukulungisa okulingana, unebhokisi lezinzwane elizinzile kakhulu, ibhokisi lesithende, ukuvikeleka kwamaqakala ngaphakathi futhi yiwona kuphela onolaka lwendawo.
Ngama-pedals amancane, ufuna ngempela inzuzo yokusebenzisa isisekelo esisodwa esikhulu kulo lonke lolo sizo. Ekugcineni, kunenketho yesisekelo sokwehla. Futhi into ngalokhu ukuthi zibukeka zifana nephedali eyisicaba esimweni nangesitayela.
Kepha banesistimu yokubamba phakathi. Futhi isizathu sokuthi bakusekele lokhu njengephedali eyisicaba ukuze ube nokulawula okugcwele kwebhayisikili futhi uncike kuzo zonke izingxenye zaleso sinyathelo. Futhi uma ungangeni endaweni efanele, unaleli kheji ongaphumula kulo.
Futhi aqinile ngokumangazayo, okuyingxenye ebalulekile yokwehla kwakho okwehlayo, ikakhulukazi ngamabhakede angaphansi aphansi emabhayisikili nasendaweni ozigibele kuyo. Kepha kukhona okuphansi, kufanele ube nesicathulo esihluke kancane ukuzigibela. Vele, noma yiziphi zalezo zicathulo ezinemisuka efanele zizosebenza kahle kulolu hlelo lokuzibamba, kepha azizwa zilungile.
Okufanelekile, okudingayo isicathulo esinendawo eyisicaba ngokuphelele. Okuningi njengesikibha. Futhi ukuthi isebenza kanjani ngalesi siqeshana se-clip, iqiniso ukuthi kuzwakala sengathi ugibela iphedali eyisicaba, kepha uthola izinzuzo zokuvalelwa lapho.
Enye into okufanele uyicabangele mayelana nokuhamba ngezinyawo kwakho ukuthi ufuna okuthile okunobukhazikhazi obuncane noma obungenayo nhlobo, noma ingabe ufuna ukushuba okuningi? Futhi engikushoyo ngokuqina ukunyakaza okwenziwa yi-cleat ngaphakathi kwe-tether ngaphambi kokuthi uphume. Isibonelo, lesi sisekelo seShimano asinakho ukushesha. Kuzwakala sengathi uvaleleke enyaweni lapho uyinamathisela kuyo, futhi ngokwenza lokhu uyazi ama-ins, ngakho-ke ukuhamba kweqakala lakho akulindelekile ukuthi kukubangele ukuthi unqume.
Manje abanye abashayeli bayawuthanda lowo muzwa kanti abanye abashayeli abakwazi ukuwumela. Abafowethu abahlanya, banokunye okuphambene. Bagijimisa ukucaca ematheni akho.
Kungani ungafuna konke lokho kukhuphuka? Okokuqala, kulula kakhulu, kusho ukuthi uma usunamathiselwe kulesi sisekelo, awukhawulelwanga endaweni eyodwa futhi uzokuvumela ukuthi uzulazule. Manje abagibeli be-enduro abanolaka nabagibeli okwehlayo bayakuthanda lokhu ikakhulukazi ngoba banenkululeko yokuhamba ngonyawo ngaphandle kokuphuma. Lokhu kuhle ikakhulukazi ezingadini zamadwala futhi ukushayela okunolaka bekulusizo kuwe futhi kukunikeze ukuqonda ngezinhlobo zamaphedali ayisicaba ongawathola wena nezinhlobo ezahlukahlukene zezinsika ezingenamshini emakethe.
Manje kunamaphuzu entengo ahlukene atholakalayo kokubili iziqeshana namafulethi -End. Kepha ngezinyathelo ezingenamakhompiyutha kufanele ukhumbule ukuthi kuzofanele utshale imali ethe xaxa njengoba uzodinga izicathulo, kepha sincoma ukuthi uma unamathela kuma-pedal ayisicaba, uzitholele isethi ehloniphekile yezicathulo ezinamapheya. Futhi unephasela elihle lokuhamba ngebhayisikili.
Ngakho-ke uma lesi kuyisikhathi sakho sokuqala ukubona uBlake kuma-pedless angenawo umdwebo njengomgibeli we-pedal flat, chofoza lapha ukuthola le ndatshana. Kuyajabulisa impela, futhi kuzokunikeza imininingwane ethe xaxa mayelana nemishini yangempela yamaphedali nokuthi asebenza kanjani. Futhi uma ufuna ukuthola ukuthi yiluphi uhlobo lwethambisi noluthambisa olulungele ibhayisikili lakho nokuthi ulusebenzisa kuphi, chofoza lapha ngezansi.
Njengenjwayelo, chofoza imbulunga encane lapha ukuze ubhalise futhi uma uthanda le ndatshana sinikeze isithupha.
Ingabe ukuhamba ngamabhayisikili asezintabeni kuyinto yonke?
Yebo,amaphedalikukhonaindawo yonkengobaamabhayisikili asezintabeni. I-crankset eyi-1 isebenzisa u-1/2? intshi ububanziamaphedali. Iziqeshana ezimbili nezingcezu ezintathu zisebenzisa u-9/16? intshi ububanziamaphedali.
Yiziphi izinyawo ezibukeka kahle kakhulu?
Okuhamba phambiliibhayisikili lomgwaqoamaphedaliungathenga namuhla
IShimano 105 R7000 SPD SL. I-okuhle kakhuluukuhamba ngebhayisikili lomgwaqo kuzo zonke izulu zamamayela wesimo sezulu, ushaya kahle ngaphezu kwesisindo sayo kubhekwa intengo.
IShimano Ultegra R8000 SPD SL.
IShimano Dura-Ace SPD SL.
BhekaIKeo Blade Carbon.
I-Wahoo Speedplay Zero.
BhekaGlue 2 uMax.
BhekaI-Keo Blade Carbon Ceramic Ti.
manje sinamaphoyinti ambalwa nje okuxhumana nebhayisikili lethu futhi kukhona lapho ungafuni ukungazinaki izinyawo futhi kahle, sinezinto ezithile esingakhetha kuzo lapha esine-sp dslspd speed play pedals flat futhi yilokho ngaphambi kokuba singene ngaphakathi izinketho ezihlukile zekhefu lekhethelo ezinamathela kulezi zinyawo, ngakho-ke asiqhubeke sihambe ngezindlela ezahlukahlukene zokunyathela kanye nokukhetha ukuze ukwazi ukukhetha okulungele wena, kulungile-ke ake sibone ukuthi siphikisana nani. Ngakho-ke ake siqale nge-pedal iningi lenu eliyaziyo futhi elijwayele ukuhlehla okuhle okudala okuyisicaba, kuyisisekelo esiyisicaba ofaka kuso unyawo lwakho bese ufaka ingcindezi bese uwa kulo. Ukukhuphuka kancane kungaba isiqeshana sezinzwane, okuyi-pedal eyisicaba futhi, kepha ngesiqeshana sezinzwane ngaphambili ongasisebenzisa ukuvikela unyawo lwakho.
Kugcina unyawo lwakho lungahambeli ezingeni elithile, kepha isinyathelo sokwenza Okungenzeka ukuthi iningi lakho onentshisekelo kukho yiphedali elingenasiqeshana, njengaleli, okuyigama elingajwayelekile ngoba ulinamathisela kulo, kodwa lokho elikushoyo ukuthi ayinaso isiqeshana sezinzwane. Umehluko kuphela ngalolu hlobo lwamaphedali ukuthi udinga isicathulo esithile sokuhamba ngebhayisikili esinjengalesi esine-cleat ebambelela ezansi bese ikhiya kulolo dobo, kepha njengoba ubona nginezinye izindlela ezimbalwa lapha nami namuhla ngivumele ngiwahlukanise futhi ngikwenzele lula. Kulungile, ake siqale nge-SPD futhi ebesineminyaka engaphezu kwengu-20 futhi kuncane kakhulu okushintshile ekwakhiweni kwalesi sikhathi.
Zithandwa kakhulu ngabahamba ngebhayisikili bezintaba, abagibeli abahamba phambili, abagibeli begravel ngisho nabagibeli, manje sengizisola kusengaphambili okusho ukuthi ungahamba ngalesi sihlangu ngendlela ongathanda ngayo ngaphandle kokuzulazula lapho kucweba khona noma ukulimaza i-elite ypopular ngabagibeli manje basebenza ngokubanqamulela kuma-pedals anezinhlangothi ezimbili, okusho ukuthi unganqampula ngapha nangapha, okuhle kakhulu lapho uhamba ngebhayisikili ezintabeni njengoba unqamulela ngaphakathi nangaphandle njalo. Ababili basebenza kahle kakhulu ezimweni ezinodaka, ukwakheka kusho ukuthi ngeke bavale kakhulu futhi abathathu babo bavame ukuba yinsimbi okusho ukuthi bahlala isikhathi eside, awuzigqoki noma uzilimaze njengoba wenza ngamanye ama-cleats futhi Ngenkathi ngokusobala ungachitha imali enhle impela kule misamelo, ungathola futhi eminye imicamelo eyisisekelo cishe engama- £ 30, kukhona neminye imiklamo nemikhiqizo laphaya efana kakhulu, ngakho-ke abazalwane baseCrank banayo le Eggbeater- System I esetshenziswe phambilini kepha futhi ungaba yinhlanganisela yalezi zinyawo ze-SPD, ungathola cishe amaphedali ayisicaba ngokwakhiwa kohlelo lwe-SPD, okungaba yindlela enhle kulabo abanovalo lokunqampula kuma-pedals, noma mhlawumbe kubagibeli bahlala begxuma bevula ibhayisikili labo njalo futhi bafuna ikhono lokuvele bahambe nje ngaphandle kokuchofoza Noma mhlawumbe ufuna Sebenzisa ibhayisikili lakho ngezicathulo zebhayisikili kwesinye isikhathi, kodwa futhi unethuba lokuzisebenzisa ngezicathulo ezingezona ezebhayisikili, kulungile, bese uqhubekela kulawo ma pedals ukuthi iningi lenu lingama-proba bly engijwayelene kakhulu nayo, ngakho-ke nginezinyawo ezingenaqhwa zeLookkeo ngakwesinye isandla ngakolunye uhlangothi ngine-shimanospd sl click pedals ezibukeka zifana ngokuphawulekayo futhi ukulunga kukhona okuncane kakhulu okubahlukanisa manje basebenzise i-cleat ngingakukhombisa lapha okuyiPiece eyodwa eqinile eqinile eyenziwe ngopulasitiki onamathele ngaphansi kwesicathulo sebhayisikili ngezikulufo ezintathu. Le ndawo enkulu yendawo ye-cleat inikeza indawo yokuxhumana engcono ne-pedal, enikezela ngokudlulisela amandla okungcono nokusebenza kahle.
Inkinga enkulu ngalezi zinhlelo ukuthi ukucwecwa kwepulasitiki kuvezwe Phansi ezicathulweni ngakho-ke lapho uqala ukuhamba uzungeze lezi zicathulo sekusele kancane futhi ngokuqinisekile uzoqala ukugqoka lezi zihlakala ngokushesha bese udlulela kokwehlukile futhi umehluko omkhulu phakathi kwalawa ma-pedals abukeka nohlelo kanye nama-shimanospd slpedals kanye nohlelo ama-shimanocleats athanda ukuba banzi kancanyana kunabo anepulatifomu ebanzi ngakho-ke ngokombono anikela ngokudluliswa kwamandla okungcono, yize lokhu kungaphikiswa, umehluko omkhulu nokukhetha kithi sonke kuncike kuphela ekuthandweni komuntu siqu nasekuzizweleni lapho kunothi zombili izinketho nezinhlelo zinezinketho ezihlukile zokucaca Ngakho-ke ngamazinga ahlukahlukene we-floa okusho inani lokunyakaza lokhu kukhishwa okukhiphayo, futhi lokho kusuka ku-zero noma ngaphansi kuya ekuhambeni okulingene ukugeleza okuncane. Iningi labantu likhetha inketho ye-lug elinganiselayo enginayo kulezi zicathulo zokuhamba ngebhayisikili lapha, ezinokuncane ukunikela. ISidemovementi isho ukuthi awufaki ubunzima obukhulu emajoyini nasemisipha yezitho ezingezansi.
Bengilokhu ngisebenzisa ukucwenga kwe-zero-float kwezinye zezicathulo zami zokuhamba ngebhayisikili isikhashana manje, ikakhulukazi uma ngigijima nje ngoba angikuthandi ngempela lokho kuhamba kohlangothi nohlangothi, ukulahleka kwamandla ngiyazi ukuthi ' m lokho okuxakile. Kusho ukuthini ukuthi, uma ufuna iZeroflow, kufanele empeleni ulungise ukucwenga kwakho kahle ukuze ungabeki ubunzima obungafanele emalungeni akho aphansi futhi uma uke waba nezinkinga noma ukulimala ngaphambi kokuthi mhlawumbe ufuna gwema ukubhukuda okungu-zero, kusobala ukuthi kukhona uhla olubanzi lwezinketho uma kukhulunywa ngalezi zinyawo. Ungakhetha izinketho ezilula kakhulu futhi bobabili ubone iShima kusuka ku-No neminye imikhiqizo cishe engamaphawundi angama-40 kuye kwangama-60, kepha-ke izinketho ezithandwa kakhulu njengokubukeka kwe-Ko2max enginakho lapha ne-Shimanoultegra oyithola cishe ngamaphawundi angama-65 kuye kwayi-100 thatha, manje ukuthola okuthile okuhluke ngokuphelele kwi-Speedplay pedal futhi isebenza cishe ngokuphambene ngokuphelele nezinketho zangaphambilini njengoba uzothola ukuthi i-pedal incane kakhulu, icishe ifane nomumo we-alollipop futhi esikhundleni se-cleat njengalezo ezinye izinketho zingena ekuhlanzeni inzuzo enkulu yalezi zidingo ukuthi ziyakwazi ukuguquguquka kahle isikhundla sokucaca singalungiswa ezindizeni ezintathu futhi zonke ngokuzimela, ngakho-ke zifeza iphupho lomlungisi webhayisikili, ikakhulukazi kumuntu okungenzeka ukuthi ukhona noma odlule Unobuhlungu emadolweni.
Ngokungafani ne-Look pedals kanye ne-Shimano SPD sl pedals, lawa angamacala amabili, ngakho-ke ungawanamathisela kunhlangothi zombili zamaphedali athandwa kakhulu ku-pal palitit futhi kufanele wazi ukuthi i-Speedplay ngincoma ukuthi usebenzise lezi zinyawo amasistimu alinda njalo, aze asho ukuthi okokuthambisa okwomile kwentwasahlobo kusetshenziswa njalo ekuhlanzeni ngokwako entwasahlobo, futhi ngizwe ngabantu abaningi ukuthi bafaka iluphu encane yamaketanga noma uhlobo oluthile lokuthambisa ku-cleat bese beqala ukushova ngokwakho ikakhulukazi uma uke wagibela ezimweni ezimanzi. Manje kufanele ngisho ukuthi lokhu kuyatholakala ngentengo ephakeme kancane. Zilokhu zikhishwa intengo ngaso sonke isikhathi kodwa selokhu zazisebenzisa azikaze zibuye futhi kufanele ngithi ngithole nje lezi zinyawo zokudlala ngejubane zeWahoo Zero.
Kuyisethi yokuqala engibe nayo. Ngijabule kakhulu ukuyisebenzisa ngiyethemba ukuthi indatshana yanamuhla ibe wusizo. Ngisebenze kaningi ama-pedals uma unemibuzo zizwe ukhululekile ukuba ngumnikazi wawo kumazwana angezansi, uma uwuthandile umbhalo wanamuhla ukuthole kuwusizo, sicela uthole isithupha, uthande ungakhohlwa bhalisa kithi ngezansi
Yiziphi izinyawo zamabhayisikili ezihamba phambili ezihamba phambili?
Ibhayisikili ehamba phambili yezintabaisicabaamaphedali
INukeproof Horizon ALLOY WINNER.
I-HT PA03A WINNER WEPLasitiki.
I-Burgtec MK4 Composite.
IBurgtec Penthouse Flats MK5.
I-Kona Wah Wah 2.
Ingabe ama-pedals angenamakhompiyutha ayingozi?
Amanye amanga amakhulu akhulunywa embonini yamabhayisikili ukuthiama-pedless angenazicucuazikho ngaphezulukuyingoziukwedlula amafulethi nokuthi awakunyusi amathuba okulimala kanzima. Abagibeli abasha batshelwa ukuthi bahlukile nje emafulethini nokuthi akukho okuphephile.
Ingabe abashayeli bamabhayisikili bezintaba basebenzisa isiqeshana kuma-pedals?
Abanyeamabhayisikili asezintabeniqala ukugibela ngeama-pedless angenazicucufuthi ungalokothi uzame amaflethi, kepha kunezizathu ezimbalwa zokuthi kungani abagibeli bawo wonke amazinga kufanele bacabangele ukwenza i-switchyou ongayidingiyenzait isizini yonke, kodwa amasonto ambalwa egibele flatamaphedaliingathuthukisa kakhulu amakhono akho wezobuchwepheshe kanye nomnotho ogibele ezindleleni.06.27.2016
Ngabe kufanele ngisebenzise ama-pedless angenasici kwibhayisikili lasentabeni?
Iphedali elingenamikhonoizicathulo zizovama ukuqina, lokhu kuthuthukisa ukudluliswa kwamandla. Kusho nokuguquguquka okuncane konyawo lwakho, okungukuthi, ukugibela okubandakanya ukushova okuqhubekayo, kuzothuthukisa ukunethezeka konyawo. Izinyawo zakho zinamathele ku-amaphedali, noma ngabe isimo sendawo sibi kanjani, bahlalabeka.11.01.2017
Kungani amabhayisikili asezintabeni engenawo amaphedali?
Kunezizathu ezimbili ezivamile zokuthi kungani izinhlobo ezahlukahlukene ze-amabhayisikili awafiki nama-pedals; izindleko zigxile kwenye indawo ku-ibhayisikilifuthiamaphedalizingenye zezinto eziqondene nomgibeli kakhulu ze-ibhayisikili lezintaba. Ngenkathi kungahle kube nezinye izizathu ezingeziwe, lezi bekuyizona ezimbili eziphambili ezavela ocwaningweni lwami.
Ngabe ama-Look pedals angcono kuneShimano?
Sifake imininingwane eminingi ngomehluko, ubuhle nobubi ngezansi, kepha njengesifinyezo esisheshayo umehluko omkhulu usondele ohlelweni lokuziqhenyanomakwehliswe esicathulweni sakho, eyokuqala igxile kakhulu emgwaqeni njengoba idala ipulatifomu enkulu yokudlulisa amandla, i-BhekaGlueamaphedalibayisibonelo esihle, ngenkathi kamuva
Ngiyeka kanjani ukuwa ngezinyawo ezinganqamuki?
Sika kahle kusengaphambili.
Njengoba ugoqela kuIma, susa isisindo sakho onyaweni oluhlala lunqanyuliwe, kuchaza uCompton, bese usula unyawo ozoyibeka phansi futhihambangobumnene kufayela le-isinyathelo, ngakho-ke uma ufika kulokhoIma, ungabeka unyawo lwakho emhlabathini ngokushesha.
Yini okufanele ngiyibheke ebhayisikilini lezintaba?
Yebo, into eyodwa okufanele ibe phezulu ohlwini lwakho ngamabheringi avaliwe. Ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni kungumdlalo ongcolile, ogcwele amadwala, udaka, isihlabathi namanzi. Zonke lezi zinto zonakalisa amabhere, ngakho-ke ukwenza isiqiniseko sokuthi uthenga i-pedal enamabhere abekiwe kufanele.
Yisiphi isithuthuthu sebhayisikili sezintaba esingenakunqampwa esihamba phambili?
Ukuphakama kungu-18mm, okuncane kakhulu emigwaqeni engenaqhwa futhi kusiza ukugwema iziteleka. Ngenxa yosayizi wepulatifomu omncane, lezi zinyawo zihamba kahle kakhulu ukuwela izwe nokulandela abagibeli. Lapho usungene emzileni onolaka ngokwengeziwe noma i-enduro, uzofuna i-pedal ngeplatifomu enkulu. Kukonke nje ngingathi ama-XTR yiwona ahamba phambili angenawo ama-MTB angenantambo.
Yini eyenza i-X track MTB pedals ikhetheke kangaka?
Onjiniyela bemikhiqizo yethu beza nohlobo lwezinhlobo ze-X-Track okuyizo zonke ezihambisana ne-SPD, ngenkathi zinikela ngezimfanelo ezahlukahlukene ezahlukahlukene ukuphendula izidingo zemikhakha engekho emigwaqweni, kusukela enduro kuya ezweni eliwela izwe kanye namatshe. Ngaphezu kokukhanya kwabo, isilinganiso sabo samandla nesisindo esibenza bahluke endaweni yesehlakalo seMTB.